भाडाका अमेरिकी सैनिकद्वारा भेनेजुएलामा गरिएको ‘कू’ को प्रयास विफल – जुगल टाईम्स
Posted on २६ बैशाख २०७७, शुक्रबार १०:२८ Author जुगल टाईम्स	Comment(0)
अमेरिकी सेनाका पूर्व सदस्य पक्राउ
भेनेजुएलाको राष्ट्रिय टेलिभिजनमा एक अमेरिकी नागरिकले राष्ट्रपति निकोलास माडुरोलाई सत्ताच्युत गरी अमेरिका ल्याउने षड्यन्त्र रचेको स्वीकार गरेका छन् । यो हप्ता पक्राउ परेका १३ जनामध्ये लुक डेनम्यान एक हुन् । भेनेजुएलाले ’em भाडाका सैनिकहरु रहेको र उनीहरुको सशस्त्र कारवाहीलाई विफल तुल्याएको दाबी गरेको छ ।
राष्ट्रपति माडुरोले यसअघि पनि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि देशमा ‘कू’ गरेर आफूलाई हटाउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । ट्रम्पले यो हप्ताको सुरुवातमा सो आरोपको खण्डन गरेका थिए । यता, सेक्रेटरी अफ स्टेट माइक पोम्पेओले पक्राउ परेका अमेरिकीहरुलाई सुरक्षितरुपमा फर्काउन ‘हरेक अस्त्र’ को प्रयोग गर्ने बताएका छन् ।
भेनेजुएलाको टेलिभिजनमा के प्रशारण भएको थियो ?
बुधबार ३४ वर्षीय डिनम्यानले टेलिभिजनमा आफूलाई भेनेजुएलाका जनतालाई हतियारको प्रशिक्षण दिन बोलाइएको र माडुरोलाई देशबाहिर लैजान काराकासमा आएर विमानस्थल कब्जामा लिने जिम्मेवारी पाएको बताएका थिए । ‘म भेनेजुएलाका जनतालाई देशमा पुनः नियन्त्रण कायम गर्न सहयोग गरिरहेको थिएँ,’ अमेरिकी सेनाको विशेष दस्ताको पूर्वसदस्य समेत रहेका डिनम्यानले भनेका थिए । फ्लोरिडाको सिल्भर कर्प नामक कम्पनीका सञ्चालक तथा पूर्व अमेरिकी सैनिक जोर्डन गोड्रेउले डिनम्यान र ४१ वर्षीय एरान बेरीलाई उक्त अपरेशनका लागि सम्पर्क गरेका थिए । भेनाजुएलाले गोड्रेउको सुपुर्दगीका लागि पहल गर्ने पनि बताएको छ ।
माडुरोका अनुसार सिल्भर कर्पले विपक्षी नेता हुवान गुवाइडोसँग करार गरेको थियो । गुवाइडोलाई अमेरिकाले भेनेजुएलाको ‘वैद्य’ नेता मान्दछ । ‘डोनाल्ड ट्रम्प यो आक्रमणको मुख्य योजनाकार हुन्,’ भिडियो प्रशारण भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा माडुरोले भने । उनले अमेरिकीहरुको निष्पक्ष सुनुवाई हुने पनि आश्वासन दिए । उनले पक्राउ परेकाहरुको अवस्था’bout थप जानकारी भने दिएनन् ।
डिनम्यान र बेरीको ’boutमा धेरै कुरा खुलिसकेको छैन । भेनेजुएलाको सैनिकको हाईकमान्डले उनीहरुले अमेरिकी सेनाको पूर्वसदस्य रहेको बताएको छ । अमेरिकी मिडियाले पनि उनीहरु अमेरिकी सेनाकै पूर्वसदस्य रहेको संकेत गरेको छ । तर, यसको पुष्टि भइसकेको छैन ।
यता, गुवाइडोले भने ती अमेरिकी नागरिकसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गरेका छन् जबकि गोड्रेउले उनको गुवाइडोसँग सम्बन्ध रहेको बताइसकेका छन् । महामारीबाट ध्यान भड्काउनका लागि यो कुरा बाहिर ल्याइएको गुवाइडोले आरोप लगाएका छन् ।
कोरोना संकटपछि तेल उद्योग जोगाउन ट्रम्पले गर्लान् इरानसँग युद्ध ?
Posted on ११ बैशाख २०७७, बिहीबार १८:०७ Author जुगल टाईम्स
अमेरिका र इरानबीच युद्ध भएमा पश्चिम एसियामा तेलको प्रवाह अवरुद्ध हुने विश्वास गरिन्छ त्यसैले यो युद्ध हुनुहुँदैन भनिन्छ । तर अहिले अमेरिकामा कच्चा तेलको मूल्य ऋणात्मक भएपछि युद्धको जोखिम मोल्दा सही हुन्छ होला ? अघिल्लो साता इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कोर्प्स नेभीका सशस्त्र डुंगाहरूले उत्तरी पर्सियन खाडीमा अमेरिकाको जलसेना तथा तटरक्षक जहाजहरूलाई हावाकावा खेलाए । […]
पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमलाई ३ वर्षको प्रतिबन्ध
Posted on १५ बैशाख २०७७, सोमबार १९:०१ Author जुगल टाईम्स
पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमललाई ३ वर्षको प्रतिबन्ध लागेको छ । पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ले अकमललाई क्रिकेट खेल्नबाट ३ वर्षको प्रतिबन्ध लगाएको हो । स्पट फिक्सिङको आरोपमा पीसीबीले सोमबार अकमललाई सबै खाले क्रिकेटमा ३ वर्षको प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ । फिक्सिङको लागि आएको प्रस्तावको रिपोर्ट नगरेको आरोप पीसीबील अकमललाई लगाएको छ । अनुशासन कमिटीका अध्यक्ष […]
रसियामा लगातार चौथो दिन १० हजार बढी संक्रमित फेला परे, नयाँ इपिसेन्टर बन्ने खतरा
Posted on २५ बैशाख २०७७, बिहीबार १०:५६ Author जुगल टाईम्स
रसियामा लगातार चौथो दिन १० हजार बढी कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। रसियाले बुधबारमात्र १० हजार ५ सय ५९ जना नयाँ संक्रमित फेला परेको पुष्टि गरेको छ। योसँगै त्यहाँ कोरोना संक्रमितको संख्या १ लाख ६५ हजार ९ सय २९ पुगेको छ। रसिया संक्रमितदर धेरै भएको दोश्रो मुलुक हो। पहिलो नम्बरमा अमेरिका छ। यस्तै रसिया कोरोनाबाट सर्वाधिक […]
कुकुरको खाजाका लागि अमेरिका निर्यात हुने छुर्पीको निकासी ठप्प